SONATA-CANTATA: February 2009
ဒီအချိန်ရောက်ရင် ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်လာတယ်…
မနေ့က ညဦးပိုင်းလောက်မှာ ရှိတဲ့ ခွန်အားတွေအကုန်သုံးပြီး လူတစ်ယောက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အနာတရ ဖြစ်အောင် ပွဲကြမ်းလိုက်ချင်မိသည်။ ကျွန်တော် ထိုမျှလောက် ရက်စက်ချင်အောင် ထိုသူသည် မည်သို့သော အပြုအမူကို ပြုမူနေသနည်း။ ထိုသူသည် စားပွဲတစ်လုံး၌ ထိုင်၍ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဟိုလှန်သည်လှန်လုပ်နေသည်။ မျက်လုံးများက တောင်မြောက်လေးပါးကို ဦးတည်ရာမဲ့ ကြည့်နေတတ်သေးသည်။ စားပွဲပေါ်မှာလည်း စာရွက်၊ စာအုပ်၊ လွယ်အိတ်၊ ခဲတံစသော အရာများက ဖွာလန်ကျဲနေသည်။ ထိုမြင်ကွင်းသည် ကျွန်တော်အား အတော်သွေးဆူစေသည်။ ထိုသူသည် ထိုင်နေရမှထပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသလိုလို၊ သွားယူသလိုလို လည်း လုပ်သေးသည်။ ထိုသူ လက်ထဲ၌ကိုင်ထားသော ခဲတံလိုလို ဘောလ်ပင်လိုလို အရာက မကြာခဏဆိုသလို လွတ်ကျနေသဖြင့် ကြမ်းပြင်သို့ ထိခြစ်သွားသော အသံကလည်း ကျွန်တော့် ဒေါသကို အမြစ်မှ ထိုးဆွပေးသလို ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော် ထိုသူကို မျက်ထောင့်နီနှင့် ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုနောက် ကျွန်တော်၏ အကြည့်တို့သည် အစိမ်းရောင်ကို ပြောင်းသွားမည်မှန်း ကျွန်တော်သိသည်။ ထိုသူကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြည့်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို တမင်တကာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားသော ထိုမျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော်မကြိုက်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်း နောက်တစ်ရောင်သို့ မပြောင်းခင် ထိုနေရာမှဖယ်ခွာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏ သနားစရာကောင်းလှသော ထိုသားကောင်မှာ အသက် ၁၁နှစ်ခန့်သာရှိသေးသော ကျွန်တော်၏ သားကြီးပင်ဖြစ်သည်။
တနေ့က ညနေစောင်း မိုးတော်တော်လေး သည်းထန်စွာရွာသည်။ ကျူရှင်သွားမည့် သားကြီးကို သူ့အဖွားကလိုက်ပို့သည်။ တအောင့်ကြာတော့ ကျောင်းပို့ရာမှ ပြန်ရောက်လာသည့် အဖွားက “ထီးကလည်း မောင်းသန်လိုက်တာ မေမေတောင် မပိတ်နိုင်လို့ ကလေးကပိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပိတ်လိုက်တာ လက်ညပ်သွားတယ်။” ဟု ထီးကို အခြောက်လှန်းရင်းပြောသည်။ သားကြီး ကျူရှင်ချိန်ပြီးခါနီးလောက်မှာ အဖွားက ဘုန်းကြီးကျောင်း တရားနာစောစော သွားမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကထွက်သွားသည်။ ခဏနေတော့ သားကြီးပြန်ရောက်လာသည်။ ကျမ တံခါးသွားဖွင့်ပေးတော့ မြင်လိုက်ရသည်က KFC ကြက်သားကြော်ဆိုင်က ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ လက်မှာတို့လို့တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲလျက်။ “ဟင် သားက မုန့်တွေ သွားဝယ်စားလာတယ်။ ဘယ်က ပိုက်ဆံနဲ့လဲ။” (ဒီနေ့ ကျူရှင်လခ သူနှင့် ထည့်ပေးလိုက်သေးသည်။) ဟု ဆီးပြောလိုက်ရာ “ဖွားဖွားလေ သားသားလက်နာသွားလို့ reward လုပ်တာတဲ့ ၀ယ်ပေးလိုက်တယ်။ သားက ဆိုင်မှာထိုင်စားရမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ အိမ်ယူလာရင် မေမေက ထမင်းတွေရှိရက်နဲ့ ၀ယ်လာတယ်ဆိုပြီး ဆူမှာလည်း ကြောက်တယ်။ နောက်တော့ သား honest ဖြစ်ရပါမယ် မေမေတို့လည်း ဆာချင် ဆာနေမှာ ဆိုပြီး အိမ်ကိုယူလာလိုက်တာ။” ကျမလည်း “အေးအေး မေမေလည်း ဆာနေတာ” ဆိုပြီး KFC one set meal ကို သားနှစ်ယောက်နှင့် မျှတစားလိုက်ကြသည်။
ညဦးပိုင်းရောက်တော့ သားကြီး ကျမတို့ အိပ်ယာမှာ စောင်ခြုံပြီးလာခွေသည်။ “မေမေ သားခေါင်းတွေ မူးတယ်။ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်။ ကိုယ်လည်းပူနေတယ်။ ဖျားပြီနဲ့ တူတယ်။” သားကြီးက ဆက်ပြောနေပြန်သည်။ “သွေးအားလည်းနည်းတယ်။ ညနေကလည်း သွေးတွေ ရှုံးသွားသေးတယ်လေ။” (ထီးညပ်၍ လက်မနှင့် လက်ညှိုးခွကြား သွေးခြေဥသွားခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။) သူ့ ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက်၊ ဆင်နားရွက်တွေ ကို မသိဟန်ပြုပြီး ကျမက “မိုးမိပြီး အအေးပတ်ပြီနဲ့ တူတယ်။ ခေါင်းတွေ မိုးထိထားသေးလား မှန်းပြစမ်း” ဆိုပြီး (ဒီအချိန်ရောက်ရင် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်လာတယ် ဟူသော သီချင်းအသွားလေးကို စိတ်ထဲမှ ငြီးရင်း) “သား ပါရာစီတမော သောက်လိုက်နော်..ရော့ရော့ ဒီမှာ… အနာကို မေမေ ဆေးလိမ်းပေးမယ်သိလား ဆရာခိုလိမ်းလိုက် သွားသွား သင်ခန်းစာတွေ သွားလုပ်လိုက်ဦး” ဟု…
ဘ၀ထဲမှ သင်ခန်းစာယူရပါမည် ဆိုလျှင်
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော်သည် မသီတာပင် ဖြစ်ပါသည်။
(စာကို စိတ်ဝင်တစား မလုပ်လိုသော၊ မေမေ့temperကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဟု ငြီးထွားတတ်သော သားကြီး တစ်ချိန်ကျ ဖတ်ဖို့
ပြူတင်းပေါက်မှ လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင် လယ်ကွင်းပြင်ကြီးများကို တမျှော်တခေါ် မြင်နေရသည်။ ငါးမွေးမြူရေး ကန်များကိုလည်း ကြိုကြား ကြိုကြားတွေ့ရသည်။ ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် သွတ်ပြားအဟောင်းများဖြင့် ခနော်ခနဲ့ဆောက်ထားသော တဲအိမ်လေးများ လည်းရှိသည်။ လေဝှေ့လိုက်လျှင် ဖုံတွေက တလိပ်လိပ် တက်သွားသည်။ မြန်မာပြည် အညာဒေသကို သတိမရမိပဲ စိတ်က “သန္တိနိကေတန်”ကို ရောက်သွားသည်။ စင်စစ် မိမိရောက်နေသော နေရသည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်ပြည်နယ်မှ တုန်းကွမ်မြို့ (Dongguan) မြို့ဖြစ်သည်။
“သန္တိနိကေတန် ပညာရေး” ဆိုသောဆောင်းပါးကို ပညာလောကစာစောင်တွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသည် (စာရေးသူ၏ အမည်ကို မမှတ်မိတော့ပါ)။ သန္တိနိကေတန်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလကတ္တားမြို့မြောက်ဖက် ကီလိုမီတာ ၁၈၀-ခန့်အကွာမှ မြို့ငယ်လေး ဖြစ်သည်။ စာပေနိုဗယ်လ်ဆုရှင် ဘင်္ဂလီ ကဗျာဆရာကြီး ရာဘင်ဒြာနတ်သ် တဂိုးတို့ မိသားစုပိုင်သော နေရာဖြစ်၍ တဂိုး၏ ဖခင်ကပင် “သန္တိနိကေတန်” (ချမ်းမြေ့အိမ်) ဟုအမည် ပေးခဲ့သည်။ ဤမြို့လေးတွင် တဂိုးက ကျောင်းသား ၅-ယောက်ခန့်ဖြင့်စ၍ ကျောင်းတစ် ကျောင်းထောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆိုသော်လည်း စာသင်ခန်း မရှိ။ သစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ၀ိုင်းဖွဲ့၍ သင်ကြားသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်၏ ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက် ပညာသင်ကြားနည်းများကို ဆန့်ကျင်၍၊ ဆရာနှင့် တပည့်အကြား, လူသားနှင့် သဘာဝအကြား ပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာ ပညာသင်ကြားသော စနစ်ဖြစ်သည်။ အရေး, အဖတ်, အတွက်ကိုသာ ဖိ၍သင်ကြားခြင်းမျိုး မဟုတ်။ သစ်ပင်တက်ချင် တက်မည်။ သစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ပန်းချီဆွဲသူ ဆွဲမည်။ တူရိယာတစ်ခုခုကို တီးမှုတ်၍ နေချင်နေမည်။ ကသူက ကနေမည်။ ပြေးလွှားခုန်ပေါက် နေသူတွေလည်း ရှိမည်။ ပညာရေးသည် ဘ၀အတွက် ပညာရေးဟူသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်လည်း ကျေးရွာများတွင် ရွာဦးကျောင်း သစ်ပင်ရိပ်အောက် ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်တွင် “ဒွေ ဧက ဒွေ” အလီတွေရွတ်၊ ဆားတစ်ဆုပ်ကို ခါးပုံစတွင်ထည့်၍ သရက်ပင်ပေါ်တက် သရက်သီးခူးစားရင် ပညာသင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် “အာဂုံဆောင်မှ အာဂလူ” ဆိုသော ထုံးကို နှလုံးမူ၍ အလွတ်ကျက်မှတ်မှုကို အလေးပေးလွန်း၍ တဂိုး၏ သန္တိနိကေတန် ပညာရေးမျိုး မဖြစ်တော့။ တက္ကသိုလ်ကြီးများ၌ပင် ကြက်တူရွေး ပညာသင်ကြားမှုကို အားထား လွန်းနေသည်။
၂၀၀၀-ခုနှစ်ကာလက တုန်းကွမ်မြို့လေးသည် စက်မှုမြို့သစ်လေးအဖြစ် ကူးပြောင်းဆဲကာလဖြစ်သည်။ လယ်ကွင်းများမှသည် စက်ရုံများတစ်ခုပြီး တစ်ခုပေါ်လာသည်။ စင်္ကာပူတွင် စီးပွားရေးပျက်ဆုတ်ကပ် (ထိုစဉ်က dot com ဈေးကွက် ပျက်သွားသည်) ကြုံသည်က တစ်ကြောင်း၊ လုပ်ခလခနှင့် ကုန်ကျစားရိတ်တွေ တက်လာသဖြင့် စင်္ကာပူတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် မကိုက်တော့သည်ကတစ်ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်ကြီးက စီးပွားရေးလမ်းဖွင့်လိုက်သည်က တစ်ကြောင်း စသဖြင့် အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် စင်္ကာပူမှ စက်ရုံအတော်များများသည် တရုတ်ပြည် ကမ်းရိုးတန်းနယ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ တရုတ်ပြည် ကုန်းတွင်းဒေသမှ လယ်သမားသားသမီးများက ကမ်းရိုးတန်းစက်မှုမြို့သစ်များသို့ သိမ်းကြုံး ဆင်းလာကြသည်။ Toffler ၏ စကားဖြင့် ဆိုရလျှင်တော့ စင်္ကာပူအား တတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်လိုက်ပြီး၊ တရုတ်ပြည်သည် စိုက်ပျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုမှ စက်မှုယဉ်ကျေးမှု ဒုတိယလှိုင်းထဲသို့ ကူးပြောင်းကာစဟု ဆိုရပေမည်။
ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်သုံးသော high-precision automation စက်များကို ထုတ်သည်။ တရုတ်ပြည်မှ (printer စက်ရုံ, head and media စက်ရုံစသော) စက်ရုံအသစ်များတွင် assembly line များ ဆင်ပေးရသည်။ စက်များအား တပ်ဆင်ပြီးသောအခါ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီရုံးခွဲမှ နယ်ခံ အင်ဂျင်နီယာများအား ထိုစက်တို့ကို ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းတတ်ရန် knowldege transfer အဖြစ်ပြန်လည် သင်ကြားပေးရသည်။ ထိုအချိန်က ခေတ်စားနေသော စကားတစ်ခုမှာ “think globally, act locally” ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာနှင့်ချီ၍ အမြင်ကျယ်ကျယ် တွေးခေါ်ပြီး, မိမိတို့ ရေမြေသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ အတတ်ပညာရှင်များ, စီမံခန့်ခွဲသူများကို တရုတ်ပြည်သို့ ခေါ်ယူ၍ စက်ရုံများကို ထူထောင်လည်ပတ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဌာနေတရုတ် အင်ဂျင်နီယာများ၊ မန်နေဂျာများကို မွေးထုတ်ပေး၍ localization လုပ်နေသော အချိန်ဖြစ်သည်။
renovation လုပ်ဆဲဖြစ်သော စက်ရုံအသစ်တစ်ခု၏ အခန်းထဲတွင် projector, ကွန်ပျုတာတို့လို အထောက်အကူပစ္စည်းများမပါပဲ၊ ကျွန်တော်က white board ပေါ်တွင် အပြာရောင် soft-pen တစ်ချောင်းကို ကိုင်ရင်း စိတ်အားတက်ကြွစွာ နားထောင်နေသော တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများအား အဆင့်မြင့် computer vision သဘောတရားများကို ချွေးတလုံးလုံးနှင့် ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ လေအဝှေ့တွင် ဖုံများထသွားသောအခါ ရုတ်တရက် (မဆီမဆိုင်ပဲ ဆိုဆို) “သန္တိနိကေတန်” ကို ပြေးသတိရမိခြင်း ဖြစ်သည်။ “ဒီ နေရာဟာ မြန်မာပြည်ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲ” လို့လည်း တွေးမိပါသေးသည်။ သို့သော်… စက်မှုနိုင်ငံတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ လိုအပ်သော infrastructure များအကြောင်း တွေးမိရင်း… အင်း… နောက်တစ်ခေါက် ကမ္ဘာစီးပွားဆုတ်ကပ် ကြုံရင်ပေါ့လေ” ဟုဖြေသိမ့်ရသည်။ ဘယ်အလှည့်လည်းတော့ မသိ။
ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ ယာယီတဲနန်းတွေက အံ့မခန်း တင့်ဆန်းနေသည်။ သူငယ်မလေးတစ်ယောက် ပေ့ါပါးရွှင်လန်းစွာဖြင့် ထိုထို တဲနန်းတွေအလယ် ဟိုမှသည် ပြေးလွှားနေသည်။ လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးလွယ်၍ လက်ထဲမှာလည်း မှတ်စုစာအုပ်လေးနှင့် ခဲတံလေးကိုင်ထားသေးသည်။ မောင်နှမ ၇ ယောက် အနက်မှ အကြီးဆုံး အစ်မကြီးက ချွေးတပြိုက်ပြိုက်ဖြင့် သူငယ်မနောက် အပြေးလိုက်နေရသည်။
ပြည်နယ် ၇ ခုနှင့် တိုင်း ၇ ခုရဲ့ ပြခန်းတွေ၊ ၀န်ကြီး ဌာနတွေရဲ့ ပြခန်းတွေ၊ ဇတ်ပွဲရုံကြီးတွေက မျက်နှာချင်းဆိုင် အပြိုင်အဆိုင်၊ မုန့်ဆိုင် ဈေးတန်းတွေနှင့် ဆိုင်ခန်း အစုံက ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲတွင် မြို့ကြီးတစ်ခု ညတွင်းချင်း ပေါက်လာသလို…
သူငယ်မလေးသည် ပြခန်းတွေမှ ပြကွက်တွေကို ငေးမောလိုက်၊ မှတ်စုထဲမှာ ရေးမှတ်လိုက်နှင့် တစ်ယောက်ထဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေသည်။ ဈေးဆိုင်တွေဘက် ခြေဦးလှည့်ချင်နေပြီဖြစ်သော အစ်မကြီးကတော့ ပါလာသည့်ရေဗူး ဖွင့်သောက်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက စောင့်နေရသည်။ သည်ကလေးမ တစ်စုံတစ်ခု ကို အာရုံစိုက်၍ နေပြီ ဆိုလျှင် သူ့အနား လာတာမကြိုက်တတ်မှန်း တသက်လုံး အရိပ်လို ကြည့်နေခဲ့သည့် အစ်မကြီးက သိသည်။
တနေစောင်းပြီ… ပြခန်းတွေ အကုန်ကြည့်၍ မပြီးသေးသော သူငယ်မက “နောက်တစ်နေ့ ထပ်လာဦးမယ်နော် … မကြီး”ဟု ဆိုကာ အလံတော် ခေတ္တ နားနေရာ စင်မြင့်ဖက်ဆီသို့ ခြေဦးလှည့်လိုက်ကြသည်။
သူငယ်မလေးသည် အလံတော်ကို တိတ်ဆိတ်စွာ အလေးပြု အပြီး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်စဉ်ဝယ် ကြယ်ပွင့်လေးတွေက ပါးစပ်လေးတွေ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြင့် စကားတွေ အများကြီး ပြောလိုက်ကြသည် …
(ငယ်စဉ်က ပြည်ထောင်စုနေ့ အခန်းအနားကျင်းပရာ ကျိုက္ကဆံကွင်းဆီသို့ …)
“သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ” ဆိုသောစကားကြားလျှင် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ ရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် ကြည့်ရသော ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အငြိမ့်ပွဲများမှ အငြိမ့်မင်းသမီး၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို ပြေးပြေး သတိရသည်။ ကလေးသဘာဝအလျောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့, ပြည်ထောင်စုနေ့, အမျိုးသားနေ့တို့ရောက်တိုင်း ပျော်သည်။ သို့သော် ချွင်းချက်တစ်ချို့တော့ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအလံတော် ရောက်လာတော့မည်ဆိုလျှင် ကြိုဆိုရေးအတွက် မလိုက်မနေရ။ နံနက်စောစောထ, အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံများဝတ်, ဝှေ့ရမ်းစရာ အလံတော်လေးများကိုင်၍ ကြိုရသည်။ အချိန်ပဲ မမှန်၍လား, စောစောစီးစီး ကြိုတင်ရောက်နေဖို့ပဲ လို၍လားတော့ မသိ။ နေမထွက်ခင်ကတည်းက တမျှော်မျှော် စောင့်နေရသော်လည်း နေမြင့်သည့်တိုင် ပေါ်မလာတတ်။ လူတွေလည်း လမ်းဘေးတွင် မိုးတိုးမတ်တပ်, ယပ်တခပ်ခပ်, ချွေတလုံးလုံးနှင့် နေပူထဲ စောင့်ကြရသည်။ မရပ်နိုင်လျှင်လည်း ကိုယ့်ဖိနပ်ကို ဖင်ခု၍ ထိုင်ရသည်။ ခရာသံများနှင့် ယာဉ်ထိမ်းရဲဆိုင်ကယ်များ လာပြီဆိုလျှင်တော့ အားရ၀မ်းသာ မတ်တပ်ထ၍ အသင့်ရှိနေသော အလံလေးများကို ဝှေ့ရမ်းကြသည်။ နောက်တော့လည်း မဟုတ်ပြန်၊ အလံတော်က မရောက်သေးဘူးတဲ့။ ဘယ်မှာပဲ ရှိသေးသတဲ့ဆိုကာ, ပြန်ထိုင်သူကထိုင်, အလံလေးများဖြင့် ယပ်ခပ်သူကခပ်ကာ မျှော်ကြရပြန်သည်။ ရောက်မဲ့ရောက်လာတော့လည်း အချို့နှစ်များဆိုလျှင် အလံတော်က အမိုးဖွင့် ကားပေါ်တွင် ခပ်သွက်သွက်လေးပါ သွားသည်။ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ ကိုယ်စီဝတ်ထားသော အလံကိုင်အဖွဲ့က ခပ်နှေးနှေး ပြေး၍ သယ်လာဆောင်လာသော နှစ်များဆိုလျှင်တော့ တော်ပါသေးသည်။ “မလိုက်မနေရ” ဆိုတာကြီးကြောင့်လားမသိ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဤသို့ အလံတော်ကြိုရခြင်းကို မကြိုက်ခဲ့, မပျော်ခဲ့။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ, တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အသက်ချွေးသွေးရင်း၍ ချုပ်ဆိုခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ကို ဒီလောက်လေးမှ အပင်ပန်းခံ ဂုဏ်မပြုနိုင်ဘူးလားဟု အပြစ်တင်လျှင်လည်း ခံရုံသာရှိပါသည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်ပြောခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေးရအပြီးတွင် အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟု တဖြည်းဖြည်း ကွဲသွားသလိုမျိုး ပြိုကွဲသွားရသည်ကို မလိုလားပါ။ သွေးစည်း ညီညွတ်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို တစည်းတလုံးတည်း အရယူခဲ့သော ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါသည်။ ညီညွှတ်မှုဖြင့် လွတ်လပ်မှုကို အရယူခဲ့ကြသလို, လွတ်လပ်မှုဖြင့်သာ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါမည်။ အဓမ္မနည်းများဖြင့် ညီညွတ်ခြင်းကို တည်ဆောက်နိုင်မည်မဟုတ်။ ရသည်ဆိုလျှင်လည်း အတုအယောင် သွေးစည်းခြင်းသာ ဖြစ်မည်။ စစ်မှန်သော လွတ်လပ်ခြင်း, ချစ်ကြည် ရင်းနှီးခြင်းတို့သည်သာ ညီညွတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ညီညွတ်ခြင်းမျိုးကသာ “သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ” ဟူသော စကားအတိုင်း အေးချမ်းသာယာခြင်း သုခကို ဆောင်ကျဉ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကရင်ပတ်ဗူးရဲ့ မှန်ဝိုင်းလေးထဲမှာ မျက်နှာတစ်ခုပေါ်နေသည်။ လျော့ရိလျော့ရဲ နှင့် မညီညာသော မျက်နှာပြင်မှာ အက်ကြောင်းရာတွေနှင့်ဖြစ်သည်။ အချို့နေရာများတွင်တော့ ချိုင့်ခွက်များနှင့် အမဲကွက်များပါ ဆိုးဝါးစွာ ပေါ်လွင်နေသည်။ မမြင်ဖူးသည့် တစ်မျက်နှာကို မြင်နေရသလိုလို… တနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောလိုက်သည့် "ဇရာကို ညာလို့မရဘူး" ဆိုသည့် စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိမှ မှန်ထဲက ပုံရိပ်သည် မိမိပင်ဖြစ်မှန်း သတိဝင်တော့သည်။
ဤကရင်ပတ်ဗူးလေးသည် မနေ့ကမှ နှုတ်ခမ်းနီဗူး တစ်ခုနှင့်အတူ ကျမဆီရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ ကျမ၏ ပကတိရုပ်သွင်ကို ဤကဲ့သို့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်မိတာကြာပြီဟု ပြော၍ရသည်။ အိမ်နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားသော မှန်တစ်ချပ်၏ အနီးအနားသို့ နေ့စဉ်ရောက်ခဲသည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပင် ... အသုံးမပြုခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်သော ဒီလို ပစ္စည်းမျိုးတွေကို ကျမ ဘာကြောင့် ၀ယ်ယူခဲ့ပါသလဲ။ လိုအပ်၍ပဲ ဟု မိမိဘာသာ ခပ်လွယ်လွယ်ပင်အဖြေပေးလိုက်သည်။
လိုအပ်လို့ သုံးရပါပြီ။ မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံး ဖြူဖွေးသွားသည်။ ၀င်းပသွားခြင်းတော့ မဟုတ်။ ရသလောက်ပေါ့လေ။ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးကို တင်လိုက်သည်။ ဟင် ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်။ ဒါလည်းမျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာပြန်။ နွမ်းပြီးသားပန်းခြောက် တစ်ခုကို ဆေးရည်စိမ်လိုက်သလိုလို… အို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မွဲခြောက်နေတာနဲ့ စာရင် သာသေးသည်ဟု မှန်ထဲက ပုံရိပ်ကို ဆင်ခြေပေးလိုက်သည်…။
ရှစ်တန်းတုန်းက ပထ၀ီဝင်ဘာသာသင်သော ဆရာမသည် ဒေါ်ရီရီမြင့် ဖြစ်သည်။ နာမည်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ အမြဲ ပြုံးရီနေသော ဆရာမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပန်းနုရောင်ဆေး ချယ်ထားတတ်သည်။ အိအိလုံးလုံး ကိုယ်လုံးလေးနှင့် လိုက်ဖတ်စွာ မျက်နှာလေးမှာလည်း ဖူးဖူးဖွေးဖွေးလေး ဖြစ်သည်။ ဆရာမ၏ ခင်ပွန်းသည်က ဆရာမကို နေ့စဉ်လိုလို E2000 ကားနှင့် ကျောင်းလာပို့လေ့ရှိသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ တစ်ခုမှာ အကြီးအကဲဖြစ်ဟန်တူသော ဆရာမ၏ ခင်ပွန်းသည် ရှပ်အဖြူ၊ တိုက်ပုံ အမဲ၊ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း မျက်မှန်နှင့်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဆရာမသည် ကျမ၏ ယခုအရွယ်ပင်…။
တစ်နေ့သောနံနက်၏ စာသင်ချိန်တွင် ဘယ်လို ဆက်စပ်သွားလေသည်မသိ ကျောင်းသူများက ဆရာမအား ချောတယ်ဟု ပြောလိုက်ကြသည်။ ဒီတော့ ဆရာမက “ဆရာမက မချောပါဘူး။ သမီးတို့က ချောတာပါ။ ဆရာမတို့က ဘယ်ချောတော့ မလဲ တိုက်စားမှု များသွားပြီလေ” ဟု ပြောလိုက်သောအခါ ကျောင်းသူများ ၀ါးကနဲ ရယ်ကြလေသည်။ သူများတွေ ဘာကြောင့် ရယ်မှန်းမသိ ကြောင်နေသောကျမ ရယ်ချိန်ကမရှိတော့ ဆရာမက ဆက်ပြောနေပြီ “နေ၊ ရေ၊ လေ တွေရဲ့ တိုက်စားမှုကြောင့်ပါ” တဲ့။
ဆရာမ ပထ၀ီဝင် သင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ တိုက်စားမှုကြောင့် တစ်ခါကြည့်တိုင်း တစ်မျိုးဖြစ်နေသည့် ရုပ်သွင်ကို မြင်တိုင်း ထိုစာသင်ချိန်လေး ကို သတိရမိသည်။
(ဆရာမ၏ အမည်မှန်မှာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် ဖြစ်ပါသည်။)
ဤဆိုင်လေးကို ပိုင်ရှင်က “နှင်းပွင့်မိုးစက်” ဟု အမည်ပေးထားလေသည်။ လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် တန်ဆာ ဆင်သော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဤဆိုင်လေးမှာ ရရှိနိုင်သည်။ ဆိုင်ရှိ ပစ္စည်းအားလုံးမှာ နှင်းပွင့်မိုးစက်တို့၏ အရောင်နှင့် ဆက်နွယ်နေခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်လေဟန် မတူ။ ဆိုင်၏ အခင်းအကျင်း တို့သည်လည်း နှင်းရောင်သန်း၍ မိုးရနံ့ပါ သင်းနေလေတော့သည်။
ကြွပါရှင်… ဒီအကန့်မှာ ပြထားတာတွေကတော့ ပညာပေးသူနဲ့ ပညာရှာသူတွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဖြူနဲ့ အစိမ်းလို့ အလွယ်တကူ ကျမတို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ မူပိုင် အရောင်ဖြစ်တဲ့ နှင်းပွင့် အရောင်နဲ့ အတူ မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ တွဲဖက်ပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဖက်ဖူးစိမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်ခြင်းကို မျက်ခြေပြတ်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ နည်းနည်းလေးမှ ကလက်တဲ့သဘော ပါလို့ မရပါဘူးရှင်။ ငှက်ခါးစိမ်း ကြေးဥစိမ်း... မဖြစ်ရပါဘူး။ အုံ့မှိုင်းတဲ့ အရိပ်အရောင် တစ်စွန်းတစ်စမှ လက်ခံလို့ မရလို့ပါ။ ကျောက်စိမ်းရောင်ကိုလည်း ကျမတို့ ရှောင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ တည်ငြိမ်သလိုနဲ့ နောက်က ကပ်လိုက်လာတဲ့ လောဘ အငွေ့လေးတွေကြောင့် ဒီအရောင်ကို လည်း သတိထားပြီး ရှောင်လိုက်ရတာပါ။ သတိရှိ မှလည်း ပညာဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါလားရှင်။
ဒီဘက်မှာတော့ နာမကျန်းကြသူတွေကို ပြုစုပေးကြတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ မူပိုင် အရောင်ဖြစ်တဲ့ နှင်းပွင့် အရောင်ကိုပဲ နွေးထွေးမှု နဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတွေ ဖြစ်စေဖို့ ဒီလို အရောင်လေးနဲ့ တွဲဖက်ထားပါတယ်။ သေသေချာချာကြည့်ပါနော် သွေးနီရောင် မဟုတ်ဘူးရှင့်။ ရက်စက်ခြင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ ရောစပ်လို့ မရပါဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်နေဖို့ ဒီအရောင်ကို ရွေးရာမှာ အသက်နဲ့ ထပ်တူ အရေးကြီးပါတယ်။ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့တို့ ၊ လျစ်လျူရှုခြင်းတို့ဆိုတာတွေ ဒီဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားသူဆီ ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာအောင် ကျမတို့ သတိကြီးစွာနဲ့ စီမံထားပါတယ်။
ဒါကတော့ တရားရေးရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ။ အဖြူနဲ့ အမဲလိုပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ အဖြူနဲ့ အမဲလို့ အလွယ်ပြောလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဖြူက ညစ်လို့ အမဲဘက် ယိုင် ၊ အမဲက ဖျော့လို့ အဖြူဘက်သန်း ဒီလို ရောရောထွေးထွေးမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အခြားရွေးချယ်စရာ ပေးမထားပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ အလွန် ပြတ်သားရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆက်ကြည့်ပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကာယ စွမ်းအား, ဉာဏစွမ်းအားတွေကို ထုတ်လုပ်ကြမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ကူညီဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးကို စီမံထားပါတယ်။ အားလုံးမှာ နှင်းပွင့် မိုးစက် ရောင်တွေ ပါနေခြင်းကတော့ ရိုးသားမှုကို အခြေခံချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်ပါ။ တစ်ပေါင်းတည်း စီးနှော သွားတဲ့ ညီညွတ်ခြင်းက အကျိုးထူးတဲ့ ရလဒ်ပါ။ အလေးဂရုပြုမိခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ရှင်… Security အတွက် ၀တ်စုံ။ အော် အော်… ဆိုင် အ၀င်ဝမှာတင်ပါ။ ရှင်သတိမထားမိခဲ့ဘူး ထင်တယ်။ ရှင့်ကို အပြစ်ဆိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ကျင့်ဝတ် သိက္ခာကို ဘယ်တော့မှ မျက်ခြေပြတ် မခံနိုင်အောင် စည်းကမ်းသေ၀ပ်တဲ့ သူအတွက် ၀တ်စုံဟာ နေရာတိုင်းမှာ ပါလေ့ မရှိပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ယောင်တောင် ဖျောက်နေတတ်တယ်ရှင့်။ ဒီလိုမှလည်း သူ့တာဝန် ကျေပွန်မှာကို နားလည်ပေးပါရှင်။
ဒီဇိုင်းတွေ အမြဲသစ်ဆန်းနေဖို့က ကျမတို့တာဝန် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူးရှင့်။ သုံးစွဲသူတို့မှာလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ တာဝန်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာလေး သိရအောင် ဟိုဘက်အခန်းမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်သွားပါဦးရှင်။ ဟုတ်ကဲ့… ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာကို သတိထားရွေးချယ် အားပေးဖို့ ပဏာမ အနေနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ယခုလို ကိုယ့်အရွယ်အစားနဲ့ ကွက်တိဖြစ်မဲ့ အတိုင်းအတာကိုသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ထမီကို စွန်တောင်ဆွဲတာကတော့ ကျမတို့ ဆိုင်ကို စော်ကားသလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆန်းသစ်ခြင်းအတွက် အာမ မခံနိုင်ပေမဲ့ တိုးတက်ခြင်းကိုတော့ နှင်းပွင့်မိုးစက်မှ ရှင်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နှင်းပွင့်မိုးစက်မှာ ပြည့်စုံခြင်းကိုတော့ ရှင်မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဦး။ နှင်းပွင့်မိုးစက်မှာ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရတဲ့ သဘောလေးရှိနေသေးတာ မေ့ထားလို့မရဘူးလေ… ဒါကြောင့်
သုံးစွဲရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် (သို့) ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ်မျိုး ရှိခဲ့ရင် ဆိတ်ဆိတ်မနေပဲ စာ ကဗျာဖြင့်သော်တစ်နည်း၊ တေးအလင်္ကာဖြင့်သော်တစ်ဖုံ ဖွင့်ဟမည်ဆိုရင် နှင်းပွင့်မိုးစက်ကို ချီးမြှောက်ခြင်းပါ။
အေးချမ်း၍ ပျော်ရွှင်သော ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာသည် “နှင်းပွင့်မိုးစက်”တွင် ပျားပန်းခတ်နေလေတော့သည်။
အထီးကျန်ခြင်းကို ခံစားရသောအခါ အထက်ပါအတိုင်း သူငယ်တန်းဖတ်စာ ထဲမှ စာပိုဒ်လေးတွင် မိမိနာမည်ကို ထည့်လိုက်မိပါတော့သည်။
အထီးကျန်ခြင်းသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းမှာ မြစ်ဖျားခံလေသလောဟု ကံ၊ ကံ၏အကျိုး ကို စစ်ကြော ဝေဖန် တီးခေါက်နေမိသည်။
အထီးကျန်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ရတာထက်ပိုလိုချင်ခြင်းများ၏ အကျိုးရလဒ်လေလောဟု ဆန်းစစ်ရသည်မှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။
မိန်းမတို့သည် အသက်အရွယ် အတန်ရလာသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဓာတ်များပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် တောင်တောင်အီအီ ဖြစ်လာတတ်ကြောင်း ကြားဖူးနားဝ ရှိခဲ့ရာ၊ ထိုအသက်အရွယ်သို့ မိမိသည် လုံလ၊ ၀ီရိယကြီးစွာဖြင့် စောလျင်စွာ ရောက်နှင့်နေပီလား…
ဒီနေ့ သင်တန်းစတော့ Mei Leen က loner alone lonely ဆိုတဲ့ စာသုံးလုံးကို White Board မှာ ရေးချလိုက်တယ်။ ကျမ အလွန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ topic မို့ တစ်စုံတစ်ခုသော ကွင်းဆက်ကလေးကို ရလေနိုးနိုး မျှော်ကိုးရင်း နဲ့ပေါ့။
ယေဘူယျ အနေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲက ကာလပေါ် နိုင်ငံရပ်ခြား ဆိုတဲ့ တေးသွားကို မဖြစ်မနေ သီဆိုကျူးရင့်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ New Year Eve မှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ သင်ခန်းစာကို ချဉ်းကပ်တယ်။ friends, family member တွေနဲ့ party, holiday အကြောင်း တွေပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာ Lifestyle တွေအကြောင်းလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဟုတ်ပေမဲ့ တစွန်းတစ အဖျားခတ်ပြီး ပါသွားတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ဇတ်လိုက် ရထားတဲ့ score ကို loner အဆင့်တွေ ခွဲထားတဲ့ table နဲ့ တိုက်ကြည့်လိုက်တော့ He’sabit ofaloner ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်တယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေ အတွက်လည်း ကိုယ်တိုင် အမှတ်ပေး၊ ရတဲ့ score တွေအားလုံးပေါင်းတော့ အဲ့ဒီလူနဲ့ တစ်မှတ်ပဲကွာသမို့ I’mabit ofaloner လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြေငြာအပြီး ခဲလေသမျှ သဲရေကျဆိုတဲ့ အဖြစ်နဲ့ သင်တန်းက ပြန်ခဲ့တယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက က Snow in the Summer စာအုပ် Introduction မှာ
Mountain-Lion I am. Alone, but not lonely any more. I have learnt to live alone. …(Page-4)တဲ့။ ဆရာတော် ဘယ်လိုများ learn လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
မိသားစု စည်းဝိုင်း အပြင်ဘက်
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းအပြင်ဘက်
ရောက်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့ ရေးချလိုက်ပါတယ်
နိကာယျ ၅-ရပျအား စနဈတကြ လလေ့ာခွငျး (၄)
ယေ ဓမ်မာ ဟတေုပ်ပဘဝါ, တသေံ ဟတေုံ တထာဂတော အာဟ။
တသေဉ်စ ယော နိရောဓော၊ ဧဝံဝါဒီ မဟာသမဏော။
အကွငျတရားတို့သညျ အကွောငျးကိုမှီ၍ ဖွဈကုနျ၏။ ထိုအကွောငျးတရားတို့ကို လညျးကောငျး, ထိုတရားတို့ ခြုပျခွငျးကို လညျးကောငျး တထာဂတသညျ ဟောတျောမူ၏။ ရဟနျးမွတျသညျ ဤသို့အယူရှိ၏။
ဗုဒ်ဓ၏ လကျယာတျောရံမထရျေ ဖွဈလာမညျ့ အရှငျသာရိပုတ်တရာပရိဗိုဇျအား ပဉ်စဝဂီငါးပါးအနကျမှ တဈပါးဖွဈသော အရှငျအဿဇိမထရျေ အကဉျြးဟောကွားသော ဂါထာဖွဈသညျ။ အကွောငျးကိုမှီ၍ဖွဈသော (ဟတေုပ်ပဘဝါ) တရားမြားဟူသညျမှာ ခန်ဓာငါးပါးကို ဆိုလိုသညျ။ တဈနညျးလညျး ဒုက်ခသစ်စာကိုဆိုလိုသညျ။ ယငျးခန်ဓာငါးပါး၏ အကွောငျးတရားသညျ ဒုက်ခဖွဈကွောငျး သမုဒယသစ်စာဖွဈ၏။ ဒုက်ခ၏အကွောငျးနှငျ့ ဒုက်ခတို့ ခြုပျငွိမျးခွငျးသညျ နိရောဓသစ်စာဖွဈသညျ။ ထိုကွောငျ့ ထိုဂါထာလေးသညျ ဒုက်ခ, သမုဒယ, နိရောဓတို့ကို ဟောကွားခွငျးဖွဈသညျ။ နောကျဆုံး မဂ်ဂသစ်စာအား တိုကျရိုကျ ဟောမထားသျောလညျး၊ သစ်စာလေးပါးတို့သညျ တပွိုငျနကျတညျးသိသော (ဧကပဋိဝဓေ) သဘောရှိ၍ အရိယသစ်စာလေးပါးလုံးအား ဟောကွားသော ဒသေနာဟု ဆိုနိုငျသညျ။
“ယော, ဘိက်ခဝေ, ဒုက်ခံ ပဿတိ, ဒုက်ခသမုဒယမ်ပိ သော ပဿတိ, ဒုက်ခနိရောဓမ်ပိ ပဿတိ, ဒုက်ခနိရောဓဂါမိနိံ ပဋိပဒမ်ပိ ပဿတိ။ … ”
ရဟနျးတို့ … အကွငျသူသညျ ဒုက်ခကို မွငျ၏။ ထိုသူသညျ ဒုက်ခဖွဈခွငျးကိုလညျး မွငျသညျ။ ဒုက်ခခြုပျခွငျးကိုလညျး မွငျသညျ။ ဒုက်ခခြုပျခွငျးသို့ ရောကျသောအကငျြ့ကိုလညျး မွငျသညျ။ …
ဒုက်ခသစ်စာမွငျသူသညျ သမုဒယ, နိရောဓ, မဂ်ဂသစ်စာတို့လညျး တပွိုငျနကျမွငျသညျ။ ထို့အတူ သမုဒယကိုမွငျသူသညျ ဒုက်ခ, နိရောဓ, မဂ်ဂသစ်စာတို့ကိုလညျး မွငျသညျ။ သစ်စာတဈပါးကို မွငျလြှငျ ကနျြသစ်စာသုံးပါးအား တပွိုငျနကျ မွငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဒုက်ခသစ်စာဟူသော ဥပါဒါနက်ခန်ဓာငါးပါးအား ထိုးထှငျးသိမွငျခွငျးသညျ သစ်စာလေးပါးလုံးအား သိမွငျခွငျးပငျ ဖွဈသညျ။
သစ်စာလေးပါးအား မသိမွငျသော ပုထုဇဉျသညျ ဥပါဒါနက်ခန်ဓာငါးပါးအား “ငါ့ဟာ, ငါ, ငါ့အတ်တ” ဟုရှုမွငျသညျ။ တိုငျ၌ခညျြထားသော ခှေးသညျ တိုငျကိုသာပတျ၍ ရပျခွငျး, ထိုငျခွငျး, ပွေးခွငျးပွုသကဲ့သို့ ပုထုဇဉျသညျ ဥပါဒါနက်ခန်ဓာငါးကိုသာ တဏှာ, မာန, ဒိဋ်ဌိတို့ဖွငျ့ ရဈပတျလှညျ့လညျကာ မလှနျမွောကျနိုငျပဲ ရှိသညျ။ အခြို့က ဘဝကို ကပျငွိသောအမွငျဖွငျ့ ဘဝတှငျ ပုနျးအောငျးကွသညျ (သွလီယန်တိ)။ အခြို့က ဘဝကိုစကျဆုတျသော အမွငျဖွငျ့ ဘဝကို လှနျပွေးကွသညျ (အတိဓာဝန်တိ)။ တိုငျမှ မလှတျနိုငျပဲ တိုငျကိုသာ ပတျပွေးနရေသော ခှေးကဲ့သို့ ပုထုဇဉျသညျ ဘဝမှ မလှတျနိုငျပဲ ဘဝတှငျ ပုနျးအောငျး၍ဖွဈစေ, ဘဝကို လှနျပွေး၍ဖွဈစေ အစှနျးတဈဖကျဖကျသို့ ရောကျနကွေသညျ။ ဤသညျကိုပငျ ဓမ်မစကွာဒသေနာတှငျ အစှနျးတရား (အန်တာ) နှဈပါး ဟုဟောကွားခဲ့သညျ။
ဒှေ မေ, ဘိက်ခဝေ, အန်တာ ပဗ်ဗဇိတနေ န သဝေိတဗ်ဗာ။ ကတမေ ဒှေ?
ယော စာယံ ကာမသေု ကာမသုခလ်လိကာနုယောဂေါ ဟီနော ဂမ်မော ပေါထုဇ်ဇနိကော အနရိယော အနတ်တသံဟိတော၊
ယော စာယံ အတ်တကိလမထာနုယောဂေါ ဒုက်ခော အနရိယော အနတ်တသံဟိတော။
ရဟနျးတို့… အိမျယာစှနျ့ခှာ ရဟနျးပွုလာသူတို့ မမှီဝဲအပျသော အစှနျးတရား နှဈပါးရှိ၏။ အဘယျ နှဈပါးတို့နညျး။
(၁) ယုတျညံ့၍ အိမျယာထူထောငျသူ လူမြားစုတို့၏ အလအေ့ကငျြ့သာဖွဈသော, မွတျသောအကငျြ့မဟုတျသော, အကြိုးမရှိသော ‘ကာမခမျြးသာကိုလိုကျစားခွငျး’ (ကာမသုခလ်လိကာနုယောဂ)
(၂) ကိုယျစိတျဆငျးရဲခွငျးကိုဖွဈစတေတျသော, မွတျသောအကငျြ့မဟုတျသော, အကြိုးမရှိသော ‘မိမိကိုမိမိ ပငျပနျးဆငျးရဲအောငျ အားထုတျခွငျး’ (အတ်တကိလမထာနုယောဂ) နှဈပါးတို့တညျး။
ဤတှငျ လူအမြားစုတို့သညျ ဘဝတှငျ ပုနျးအောငျးနသေူမြား ဖွဈကွသညျ။ ကာမဂုဏျခမျြးသာတှငျ နဈမြောကာ ကာမဂုဏျအာရုံမြားနောကျ လိုကျစားပြျောမှနေ့ကွေသညျ။ ကာမသုခလ်လိကာနုယောဂ (ကာမသုခ+ လိက - ကပျငွိသော + အနုယောဂ - အားထုတျခွငျး) အစှနျးဟုချေါသညျ။ အခြို့ကား ဘဝကို စကျဆုတျ, ရှကျရှံ့သညျဖွဈ၍ လှနျပွေးသူမြား ဖွဈသညျ။ ထိုသူတို့သညျ မိမိကိုယျ မိမိနှိပျစကျ ညှဉျးပနျး, ပငျပနျးဆငျးရဲအောငျ ကငျြ့ကွံ၍ ဘဝကငျးပွတျမှုကို ရှာဖှကွေသညျ။ အတ်တကိလမထာနုယောဂ (အတ်တ- မိမိ + ကိလမထ - ပငျပနျးခွငျး + အနုယောဂ - အားထုတျခွငျး) အစှနျးဟုချေါသညျ။ ထိုအစှနျးတရားနှဈပါးတို့သို့ မကပျသော အလယျအလတျကငျြ့စဉျ (မဇ်ဈိမပဋိပဒါ) သညျ အင်ျဂါ အစိတျအပိုငျး ရှဈပါးပါဝငျသော အကငျြ့လမျး (အဋ်ဌင်ျဂိကမဂ်ဂ = အဋ်ဌ-ရှဈ + အင်ျဂ-အစိတျအပိုငျး + ဣက - ရှိသော + မဂ်ဂ - လမျး) ဖွဈသညျ။ ဒုက်ခခြုပျငွိမျးခွငျးသို့ ရောကျသောအကငျြ့လမျး (ဒုက်ခနိရောဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ) မဂ်ဂသစ်စာပငျ ဖွဈသညျ။
(၄) ဣဒံ ခေါ ပန, ဘိက်ခဝေ, ဒုက်ခနိရောဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစ်စံ။ အယမဝေ အရိယော အဋ်ဌင်ျဂိကော မဂ်ဂေါ။ သယေထြိဒံ- သမ်မာဒိဋ်ဌိ သမ်မာသင်ျကပ်ပေါ သမ်မာဝါစာ သမ်မာကမ်မန်တော သမ်မာအာဇီဝေါ သမ်မာဝါယာမော သမ်မာသတိ သမ်မာသမာဓိ။
ရဟနျးတို့… ဤကား ဒုက်ခနိရောဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစ်စာ (ဆငျးရဲခြုပျခွငျးသို့ရောကျသော အကငျြ့လမျး ဟူသညျ့ အရိယာတို့သိအပျသော အမှနျတရား- မဂ်ဂသစ်စာ) တညျး။ ဤသညျတို့ကား -
၁။ သမ်မာဒိဋ်ဌိ (မှနျကနျစှာ သိမွငျခွငျး)
၂။ သမ်မာသင်ျကပ်ပ (မှနျကနျစှာ ကွံစညျခွငျး)
၃။ သမ်မာဝါစာ (မှနျကနျစှာ ပွောဆိုခွငျး)
၄။ သမ်မာကမ်မန်တ (မှနျကနျစှာ ပွုမူခွငျး)
၅။ သမ်မာအာဇီဝ (မှနျကနျစှာ အသကျမှခွေငျး)
၆။ သမ်မာဝါယာမ (မှနျကနျစှာ အားထုတျခွငျး)
၇။ သမ်မာသတိ (မှနျကနျစှာ အောကျမခွေ့ငျး)
၈။ သမ်မာသမာဓိ (မှနျကနျစှာ တညျကွညျခွငျး) ဟူသောအင်ျဂါရှဈပါးရှိသော အကငျြ့လမျး (အဋ်ဌင်ျဂိကမဂ်ဂ) ဖွဈသညျ။
သစ်စာလေးပါးအား ဉာဏျသုံးပါး, အပွနျသုံးပွနျအားဖွငျ့ (တိပရိဝဋ်ဋ) သိမွငျပုံကို ဓမ်မစကွာဒသေနာတှငျ ဟောကွားထားသညျ။ ဥပါဒါနက်ခန်ဓာငါးပါးသညျ ဒုက်ခသစ်စာ၊ တဏှာသညျ ဒုက်ခဖွဈခွငျး သမုဒယသစ်စာ၊ တဏှာခြုပျငွိမျးခွငျးသညျ ဒုက်ခခြုပျငွိမျးခွငျး နိရောဓသစ်စာ၊ မဂ်ဂငျရှဈပါးသညျ ဒုက်ခခြုပျခွငျးသို့ရောကျသော အကငျြ့လမျး မဂ်ဂသစ်စာဟု သိခွငျးသညျ သစ်စာသိမွငျသော သစ်စဉာဏျ ဖွဈသညျ။
ဥပါဒါနက်ခန်ဓာငါးပါးသညျ ပိုငျးခွား၍ သိရမညျ့တရား (ပရိညယြေ)၊ တဏှာ (နှငျ့တကှသော ကိလသောတို့)သညျ ပယျသတျရမညျ့တရား (ပဟာတဗ်ဗ)၊ ဒုက်ခခြုပျငွိမျးရာ နိဗ်ဗာနျသညျ မကျြမှောကျပွု ဆိုကျရောကျရမညျ့တရား (သစ်စိကာတဗ်ဗ)၊ မဂ်ဂငျရှဈပါးသညျ ကငျြ့ကွံပှားမြားရမညျ့တရား (ဘာဝတေဗ်ဗ)ဟု “သိ-ပယျ-ဆိုကျ-ပှား” ကိစ်စတာဝနျ လေးရပျနှငျ့ တှဲဖကျ သိမွငျခွငျးသညျ ကိစ်စဉာဏျဖွဈသညျ။
ပိုငျးခွားသိရမညျ့ တရားတို့အား သိပွီးပွီ၊ ပယျသတျရမညျ့ တရားမြားအား ပယျသတျပွီးပွီ၊ မကျြမှောကျပွုရမညျ့ တရားမြားအား မကျြမှောကျပွုပွီးပွီ၊ ပှားမြားရမညျ့ တရားမြားအား ပှားမြားပွီးဟု သိမွငျခွငျးသညျ ကတဉာဏျဖွဈသညျ။ ဤသို့ သစ်စဉာဏျ, ကိစ်စဉာဏျ, ကတဉာဏျဟူသောအပွနျသုံးပါးဖွငျ့ သစ်စာလေးပါးအား အခွငျးရာ ၁၂-ပါး ( ၄ x ၃ = ၁၂ ဒှါရသကာရ) ဖွငျ့ ဟုတျတိုငျးမှနျစှာ ထိုးထှငျး၍ သိပွီးမှသာ ဘုရားအဖွဈကို ဝနျခံကွောငျး မိနျ့ကွားသညျ။
၂။ ဝိနညျးမဟာဝါ-၆၀၊ သာရိပုတ်တမောဂ်ဂလာနပဗ်ဗဇကထာ
၃။ သံ-၅-၁၁၀၀-သစ်စသံယုတျ၊ ကောဋိဂါမဝဂျ၊ ဂဝမ်ပတိသုတျ
၄။ သံ-၃-၉၉-ခန်ဓသံယုတျ၊ ပုပ်ဖဝဂျ၊ ဂဒ်ဒူလဗဒ်ဓသုတျ
၅။ ဣတိဝုတ်တက-၄၉၊ ဒုကနိပါတျ-ဒုတိယဝဂျ-ဒိဋ်ဌိဂတသုတျ
Labels: ဓမ္မဒါန, ဓမ်မမှတျစု, ဧရာ